Xaaladda dhaqaale ee Vietnam | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Vietnam, waa dhaqaale cusub oo soo ifbaxaya
Warbaahinta kaladuwan ayaa mararka qaarkood nagu qancisa tirada badan ee macluumaadka ay noo soo diraan Horumarinta dhaqaalaha Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, Aasiya waxaa jira dalal kale oo sanadaha soo socda qorsheynaya inay abuuraan xiriiro xiriir ah oo cusub oo ay la yeeshaan quwadaha waaweyn ee adduunka sida Ruushka ama Mareykanka. Waa kiiska Vietnam, saaxiib ganacsi oo duug ah oo dalka Ruushka ah oo xiriir dhow la leh iskaashiga militariga, saliidda, gaaska, tamarta nukliyeerka iyo dalxiiska.
La Dhaqaalaha Vietnam waa xilli koritaan joogto ah. Intii lagu guda jiray sagaalkii bilood ee ugu horreeyay 2014, kororka waxsoosaarka waddanku wuxuu ahaa 5,62%, oo ka sarreeya heerka sicir bararka, oo ah 5%. Wax soo saarka gudaha iyo dhoofinta labaduba waxay muujinayaan isbeddel wanaagsan sanadkii la soo dhaafay. Aad ayey u badan tahay in sanadka 2014 ay haystaan ​​14,2% dhoofsi ka badan kii sanadkii hore, ama maxaa la mid ah, dheeri ka badan 2.400 milyan oo doolar.
La Isweydaarsiga saamiyada ee Vietnam ayaa weli ka mid ah shanta suuqyada ugu koritaanka badan adduunka. Intii lagu guda jiray sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sanadka 2014, sicirka suuqyada saamiyada ayaa kor u kacay 19,9% ​​iyo 30,4% marka loo barbardhigo isla muddadaas 2013. Suuqa iibka guryaha ee Fiitnaam sidoo kale wuu korayaa, halka keydka sarrifka lacagaha qalaad ee waddanku uu gaadhay heerar rikoodh ah, iyadoo in ka badan 35.000 milyan oo doolar.
Xaaladdan dhaqaale ee soo jiidanaysa sinnaba sinaba uma aysan dareemin dhaqaalaha dalalka deriska la ah. Ku Rugta Ganacsiga ee Singapore ayaa Vietnam ku darsaday liistada wadamada ugu wanaagsan Aasiya ee ay maal gashan karaan hadda.
Si kastaba ha noqotee, Vietnam waxay la kulantaa dhowr dhibaatooyin oo khuseeya. Dhaqaaleyahanada Fiitnaam waxay u arkeen inay khatar tahay in dhaqaalaha qaranka uu si weyn ugu tiirsanaado shirkadaha shisheeyaha iska leeyihiin, kuwaas oo gaaraya 70% wadarta dhoofinta dalka. Dhibaatada kale ayaa ah baahida hoose ee suuqa qaranka, 1,5% in ka yar sanad ka hor.
Sidoo kale, waxaa jira tiro badan oo shirkado dareere ah. Illaa iyo hadda 2014, ilaa 50.000 kun oo shirkadood ayaa ku dhawaaqay musalafnimo, waxoogaa ka badan dhammaan sannadihii 2013. Intaas waxaa sii dheer, howlaha shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa aad u gaabis ah. Intii lagu gudajiray sideedii bilood ee ugu horeysay sanadka 2014, kaliya 55 kamid ah 432 shirkadood ayaa la wareejiyay, markii dhammaantood ay qasab tahay inay maraan nidaamkan kahor 2015.
In kasta oo dhibaatooyinkaas oo dhami aysan abuuri doonin dhibaatooyin daran oo xagga horumarka ah Dhaqaalaha VietnamHaa, waxay saameyn muhiim ah ku yeelan lahaayeen xawaaraha adduunka. Waddanka Fiitnaam wuxuu ku biirayaa Thailand, Malaysia, Singapore iyo Indonesia, waddamada Koonfur-bari Aasiya oo hadda noqday kuwa ugu weyn ee soo koraya ee adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Vietnam, waa dhaqaale cusub oo soo ifbaxaya
Warbixin cusub oo ku saabsan saameynta heshiiska EU-US ee Ganacsiga Xorta ah (TTIP)